कसरी आईफोनको साथ लामो एक्सपोजर फोटोहरू प्राप्त गर्ने आईफोन समाचार
मोबाइल क्यामेरा प्रयोगकर्ताहरूले कहिँ पनि तस्बिर लिनको लागि सबैभन्दा प्रयोग गरिएको समाधान बनेको छ जुन तथ्य हो। थप रूपमा, यस मागको लागि धन्यवाद, मोबाइल फोनको फोटोग्राफी क्षमताहरू गएको छ क्रिसेन्डोमा। जे होस्, यो भाग टर्मिनलको उच्च अन्तमा अधिक कुख्यातता प्राप्त भएको छ.
आईफोन एक त्यस्तो कम्प्युटर हो जुन फोटोहरू खिच्दा सबै भन्दा धेरै सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ। र अधिक यदि हामीसँग आईफोन S एस छ भने। किन? ठिक छ, किनभने यो मोडेलको साथ हामी एनिमेटेड फोटोहरू लिने नयाँ तरिकाको साथ प्रस्तुत भएका थियौं, "लाइभ फोटोहरू" को रूपमा पनि परिचित छ। जे होस्, मार्केटमा आईओएस ११ को आगमनको साथ, यी क्याप्चरहरूले अधिक प्रख्यातता लिए र नयाँ प्रभावहरू थप्न सकिन्छ। र ती मध्ये एक एक हो जुन लामो जोखिमलाई जनाउँछ। अबदेखि लामो जोखिम प्रभावको साथ स्न्यापशटहरू प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ। यसलाई कसरी गर्ने हेरौं।
1 लामो जोखिम फोटो के हो?
2 पहिलो कुरा: प्रत्यक्ष फोटो विकल्प सक्रिय भएको
3 दोस्रो कुरा: फोटोमा त्यो छवि फेला पार्नुहोस्
4 तेस्रो र अन्तिम: छवि खेल्नुहोस् र लामो एक्सपोजर फिल्टर लागू गर्नुहोस्
लामो जोखिम फोटो के हो?
हामीले तपाईलाई भन्नु पर्ने पहिलो कुरा यो प्राविधिक कार्य पूरा गर्न गाह्रो छ। थप रूपमा, शटमा हिर्काउने पनि आफ्नै चीज हुन्छ। फोटोग्राफीमा सबै भन्दा उन्नत प्रयोगकर्ताहरू निश्चय जान्दछन् कि हामी के बारेमा कुरा गर्दैछौं। तर एउटा छोटो सारांश बनाउन, तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ कि फोटो क्यामेराले छविहरू क्याप्चर गर्दछ उनीहरूको संयन्त्रका विभिन्न भागहरूलाई धन्यवाद। तर मूलतः यो प्राविधिक त्यो प्राप्त गर्न हो जब हामी शटर बटन थिच्दछौं क्यामेरा शटर अधिक बिस्तारै बन्द हुन्छ। यसले सबै कुरा बनाउँदछ जुन हुन्छ - सँधै गतिशील - एकल छविमा क्याप्चर गरियो। यसैले यी उल्लेखनीय परिणामहरू।
पहिलो कुरा: प्रत्यक्ष फोटो विकल्प सक्रिय भएको
आईफोनमा यो लामो एक्सपोजर प्रभाव प्राप्त गर्न, हामीसँग पहिलो चीज भनेको लाइभ फोटो विकल्प सक्रिय हुनुपर्दछ; अन्यथा यो शटलाई प्रभाव दिन असम्भव हुनेछ। तपाईं त्यो देख्नुहुनेछ को शीर्ष मा अनुप्रयोग आईफोनमा "क्यामेरा" मुनि बिभिन्न आइकनहरू देखा पर्दछ "पाँच सटीक हुन।"
शीर्षको बीचमा बीचमा तपाईं बिभिन्न सर्कलहरूका साथ आइकन देख्नुहुनेछ। यो पहेलोमा फ्ल्यास स sign्केत तलको साथ हुनेछ। यो हुनेछ लाइभ फोटो मोड सक्रिय भएको संकेत गर्दछ। अब तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ र छवि क्याप्चरलाई हिट गर्नुपर्नेछ। उसको विचारमा त्यो क्याप्चरमा आन्दोलन हुनै पर्छ ताकि पछि हामीले त्यो प्रभाव फोटोमा खिच्न सकौं; अर्को शब्दमा, यदि तपाईं सबै स्थिर तत्वहरूको साथ ल्यान्डस्केप फोटो खिच्नुहुन्छ भने, आईफोन सायद यस शटमा लामो एक्सपोजर प्रभाव प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
अब, यदि हामी धेरै सवारी ट्राफिक भएको सडकमा इ photograph्गित गर्ने फोटो लिन्छौं भने - रातमा यो थप दर्शनीय हुनेछ - हामी केहि आश्चर्यजनक प्रभावहरूको साथ एक लामो जोखिम फोटोग्राफी प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसकारण किन आधारमा आईफोनको प्रभाव आधारित छ राम्रो हुनु पर्छ।
दोस्रो कुरा: फोटोमा त्यो छवि फेला पार्नुहोस्
एक पटक हामीले क्याप्चर गरिसकेपछि, यो आईफोनको "फोटो" अनुप्रयोगमा जान समय हुनेछ। तल हामीसँग बिभिन्न विकल्पहरू छन्: फोटो, सम्झना, साझा र एल्बमहरू। हामीलाई रुची दिने यो अन्तिम विकल्प हो। भित्र हामीसँग विभिन्न फोल्डरहरू छन् र ती मध्ये एकलाई "प्रत्यक्ष फोटो" भनिन्छ।
भित्र क्याप्चर हुनेछ - र अन्य सबै - जुन यो सक्रिय प्रकार्यका साथ लिइएको छ। सावधान रहनुहोस्, यदि हामीले शट पछि केहि धेरै फोटोहरू लिएका छैनौं भने त्यसले हामीलाई चासो दिन्छ, पनि हामी यसलाई छिटो फेला पार्नेछौं विकल्प «फोटोहरू the तल्लो मेनुमा। जब हामी यसलाई खोल्छौं, हामीसँग पहिले त्यो छवि हुनेछ।
तेस्रो र अन्तिम: छवि खेल्नुहोस् र लामो एक्सपोजर फिल्टर लागू गर्नुहोस्
हामी हाम्रो इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नबाट एक कदम टाढा छौं। हाम्रो रुचि लाइभ फोटो खोल्नु भएपछि, हामी यसमा दृढ थिचिएर हेर्नेछौं, छविको तत्वहरू जीवनमा आउँदछन्। छवि थिच्दा, आफ्नो औंला माथि स्लाइड गर्नुहोस्; नयाँ मेनू तपाई समक्ष देखा पर्नेछ। ठ्याक्कै, प्रभावहरू हुन् जुन तपाईं लाइभ फोटोमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छन्: प्रत्यक्ष, बुबल, बाउन्स र लामो एक्सपोजर.
जस्तो तपाईले पहिल्यै कल्पना गरिसक्नु भएको छ, यो पछिल्लो त्यस्तो चीज हो जुन हामीलाई चासो राख्छ। त्यो प्रभाव छनौट गरेपछि, यो छविमा सिधा लागू हुनेछ र, यदि हामीले मूल कुरालाई हिट गरेका छौं भने, नतिजा तपाईंको साथीहरू र परिवारसँग साझेदारी गर्न योग्य हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी आईफोनको साथ लामो एक्सपोजर फोटोहरू प्राप्त गर्ने
धन्यबाद, मलाई थाँहा थिएन। म भोली कोशिश गर्छु।
थ्रीडी सेन्सरहरू अर्को साल एन्ड्रोइड टर्मिनलहरूमा पुग्नेछन्